Daawo Sawirro: Xildhibaannada Baarlamaanka cusub ee Jubbaland oo la dhaariyey, Guddoomiye cusubna doortay | HalQaran.com
Daawo Sawirro: Xildhibaannada Baarlamaanka cusub ee Jubbaland oo la dhaariyey, Guddoomiye cusubna doortay
Guddoomiyaha KMG ee Baarlamaanka Jubbaland, Sheekh Cabdi Yuusuf Cali
Kismaayo (Halqaran.com) – Guddoomiyaha KMG ee Baarlamaanka Jubbaland ayaa loo doortay Xildhibaan Sheekh Cabdi Yuusuf Cali oo noqday xildhibaanka ugu da’da weyn, kaddib markii la dhaariyay xildhibaannada cusub ee xalay la soo magacaabay.
Guddoomiyahan cusub ayaa waxa uu xilka sii hayn doonnaa inta laga soo dooran doono Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland iyo Ku-xigeenadiisa.
Guddoonka KMG Baarlamaanka Jubbaland ayaa maarayn doona fadhiyada Baarlamaanka, oo shaqooyin muhiim ah ay horyaalaan inta aan la soo dooran Guddoonka Baarlamaanka.
Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland oo maanta lagu dhaariyay Magaalada Kismaayo ayaa si ku meel gaar ah u doortay inuu shaqada Baarlamaanka sii wado Sheekh Cabdi Yuusuf Cali.
Guddiga Doorashada Jubbaland ayaa xildhibaanadan soo magacaabay, iyadoo isla maanta Magaalada Kismaayo looga dhawaaqay Xildhibaano kale, oo ay soo magacaabeen Guddiga Midowga Musharaxiinta Mucaaradka.
Guddiga Doorashada Jubbaland oo loo xagliyo dhinaca Madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa shaki badan laga muujinaya sida ay dhexdhexaad uga noqon karaan tartanka adag ee la fillaya in uu dhawaan ka qabsoomo Magaalada Kismaayo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in aanay aqoonsan doonin natiijada Doorashada maamulka Jubbaland ka soo baxda.
Lama oga sida uu xaalka noqon doono, haddii ayba wasaaraddii arrimaha gudaha sii sheegtay in aysan oggolaan doonin natiijo walba oo ka soo baxda doorashadaasi.
guddoomiyaha cusub ee Jubbaland
Sheekh Cabdi Yuusuf Cali
Xildhibaannada Baarlamaanka cusub